Gentamycin Sulphate 10% tsindrona - China NCPCVET
ANARANA: Gentamycin Sulphate 10% tsindrona fanaovana tsindrona Gentamycin Sulphate ml tsirairay ahitana Gentamycin sulphate 100mg toetra: colorless na efa mazava colorless rano. PHARMACOLOGICAL: Pharmacological vokatry ny vokatra ity eo amin'ny isan-karazany ny gram-ratsy bakteria (toy ny E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella, Salmonella, sns) ary Staphylococcus aureus (anisan'izany ny famokarana ao anatin'ny β- amide fungal sorisory) no antibacterial vokany. Most streptococci ...
Gentamycin Sulphate tsindrona
Ml tsirairay dia mirakitra Gentamycin sulphate 100mg
colorless na efa mazava colorless rano.
Pharmacological vokatry ny vokatra ity eo amin'ny isan-karazany ny gram-ratsy bakteria (toy ny E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella, Salmonella, sns) ary Staphylococcus aureus (anisan'izany ny famokarana ao anatin'ny β- amide fungal sorisory) manana fiantraikany antibacterial . Ny ankamaroan'ny streptococci (Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus faecalis, sns), anaerobic bakteria (Bacteroides na Clostridium), Mycobacterium tioberkilaozy, rickettsial sy holatra mahatohitra ny zavatra simika.
Ampiasaina amin'ny septicemia, urogenital aretina, aretina taovam-pisefoana taratasy mivalona, ​​tsinay aretina (anisan'izany ny peritonitis), biliary taratasy mivalona aretina, mastitis sy ny hoditra sy malefaka sela aretina, tsy variana amin'ny vava, nampiasaina ho an'ny tsinay aretina.
izy mba hampandeha vestibular levitra kokoa mahazatra, fa koa mahatonga azo ahitsy renal habetsahan'ny poizina, izay sy ny fanangonan-karena ao amin'ny renal mifandray cortex. Indraindray mahazaka fanehoan-kevitra.
saka dia mora mahatsapa kokoa ny zavatra simika, constants mety hahatonga maloiloy, mandoa, salivation, ary ataxia.
neuromuscular fanakanana vokatry matetika vokatry ny fatrany be loatra mahatonga. Saka, alika ankapobeny fanatoranana fandidiana, mpiray fampiasana ny penisilinina, streptomycin mba hisorohana ny aretina, rehefa, matetika ny fahafatesana tsy nampoizina, izay noho ny ankapobeny fanafody fanadontoana sy ny hozatra relaxant mba hanatsarana ny vokatry ny neuromuscular fahirano.
Maharitra fampiasana voa mety simba.
Levitra iray, 2 ~ 4mg isaky ny lanjan'ny vatana ho fiandrasana omby aman'ondry, 3 ~ 5mg ny alika sy ny saka, indroa isan'andro
, 2 ~ 3days foana.
Azo miaraka carbenicillin fitsaboana ny pnemonia mafy, fa misy tsy mifanaraka in vitro.
Izany vokatra mitambatra amin'ny penisilinina, Streptococcus ny synergistic vokany.
Manana taovam-pisefoana ny fahaketrahana, fa tsy intravenous tsindrona.
Gentamycin tsindrona (Veterinary fampiasana ihany)
Ml tsirairay dia mirakitra Gentamycin 100mg
10ml / 20ml / 50ml / 100ml isan-tavoara feno
Cattle, vorona, ondry, soavaly, kisoa, Cow, na rameva, Dog, Cat.
Tsinay sy ny aretina taovam-pisefoana vokatry ny bakteria gentamycin saro-pady, toy ny E. coli, Klebsiella, Pasteurella sy Salmonella spp., Amin'ny ombilahy kely, omby, osy, ondry sy kisoa.
Fa intramuscular fitantanana General: Indroa isan'andro 1 ml. isaky ny 20 - 40 kg. lanjan'ny vatana mandritra ny 3 andro.
ITEM Gentamycin Sulphate 10% tsindrona
PRODUCT NAME Gentamycin Sulphate tsindrona
Active sakafo Gentamycin Sulphate tsindrona Ml tsirairay dia mirakitra Gentamycin sulphate 100mg
famantarana Gentamycin Sulphate tsindrona Ampiasaina mba hanaovan-septicemia, urogenital aretina, aretina taovam-pisefoana taratasy mivalona, tsinay aretina (anisan'izany ny peritonitis), biliary taratasy mivalona aretina, mastitis sy ny hoditra sy malefaka
sela aretina, tsy variana amin'ny vava, nampiasaina ho an'ny tsinay aretina.
Levitra SY ADMINISTRATION Gentamycin Sulphate tsindrona Intramuscular tsindrona
CATEGORY Gentamycin Sulphate tsindrona antibacterial zava-mahadomelina
fanesorana NANOMBOKA TEO Gentamycin Sulphate tsindrona Kisoa: 40days
Malina Gentamycin Sulphate tsindrona Izany vokatra manana ny taovam-pisefoana vokatry ny fahaketrahana, dia tsy azo nampidirany intravenously
Target Animal Gentamycin Sulphate tsindrona kisoa ondry omby
Previous: Flunixin Meglumine tsindrona
Next: Iron dextran tsindrona
Animal famonoana bibikely
Animal famonoana bibikely ilay Iodophor
Animal Niutrition Supplements
Antibacterial zava-mahadomelina biby
Best Mpivarotra Veterinary Fitsaboana
famonoana bibikely ilay Chlorotetracycline
famonoana bibikely ilay biby
tsindrona Fa Veterinary
biby fiompy sy akoho amam-borona Special zava-mahadomelina
akoho amam-borona Veterinary Fitsaboana
Tiamulin Animal Veterinary Fitsaboana
Veterinary Medicine Animal akoho amam-borona Fitsaboana
Weight Gainer Fa Biby
Iron dextran tsindrona
Sulfachlorpyridazine iombonana amin'ny Sodium Powder
Lincomycin hydrochloride tsindrona